သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ၁၀၊၁၀၊၁၀
၁၀၊၁၀၊၁၀ တဲ့။ ဘာတွေမှန်းတော့သိဘူး။ စုံနေတာပါဘဲ။ ဗေဒင်၊ သိပ္ပံ၊ အားကစား၊ မွေးနေ့၊ ဒဏ်ရာရတာတွေတောင်ပါလိုက်သေး။ ၁၀၊၁၀၊၁၀ အမှတ်တရတဲ့လေ။ Event တွေက များမှများဘဲ။ A Global Day တဲ့။ A most auspicious day တဲ့။ The large day of positive action on climate change လုပ်ကြမယ်တဲ့။ ရောက်တတ်ရာရာတွေ အကုန်လုံးလုပ်နေကြသလိုပါဘဲ။ ဘာများထူးမလဲဆိုပြီး ၁၀၊၁၀၊၁၀ အကြောင်း ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေပေါ်တက်ပြီး ရှာကြည့်ဖြစ်သေးတယ်။ ခေါင်းကို မူးသွားတာပါဘဲ။ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မသိလိုက်ဘူး။ စိတ်မ၀င်စားတာလဲ ပါတာပေါ့လေ။ သိတယ်မဟုတ်လား၊ ကျနော်က စိတ်မ၀င်စားရင် ဟိုလှန်ဒီလှန်လောက်ဘဲ လုပ်တတ်တာကိုလေ။ :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
စာဖတ်ဘော်ဒါတွေလဲ လုပ်ထားကြနော်။ ၁၀၊၁၀၊၁၀ မှာ ဘာမှ အမှတ်တရမကျန်ခဲ့ဘဲ ဖြစ်နေဦးမယ်။ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိရင် လက် ၁၀ ချောင်း လက်သဲနီဆိုးတာတို့၊ ထိုင်ထ ၁၀ ခါတို့၊ အိပ်ထ ၁၀ ခါတို့၊ ရှူးရှူးပေါက် ၁၀ခါတို့ လုပ်ထားကြရင် မကောင်းဘူးလား။ ဒါမှ ၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀ အတွက် အမှတ်တရ ကျန်မှာလေ။ မဟေသီလေးများ ကိုယ်စီရှိကြတဲ့သူတွေကတော့ မွှေးမွှေး ၁၀ ပေးရင် ပိုပြီး အမှတ်တရ ဖြစ်မလားလို့။ ကျနော်ကတော့ ဘာမသိညာမသိ၊ သူများ ၁၀ ဆိုလို့ မနက်က အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း မေတ္တသုတ်တော့ ၁၀ ခါ ရွတ်ပြီးပြီ။ အမှတ်တရ မကျန်မှာ စိုးလို့။ နောက်ထပ် ဘယ်လိုမျိုး ၁၀ တွေလုပ်ရဦးမလဲ။ တော်ပြီ။ စာကြောင်းလဲ ၁၀ ကြောင်းပြည့်သွားပြီ။ ဒါလဲ အမှတ်တရဘဲပေါ့။ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:58
၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀ ရဲ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်မှာ ချစ်သူကို မွှေးမွှေး ၁၀ ခါပေး။
Sunday, 10 October 2010 at 14:07:00 BST
ဖုန်း ၁၀ ခါဆက်
Sunday, 10 October 2010 at 14:08:00 BST
မက်ဆေ့ခ်ျ ၁၀ ခါ ပို့
ရေ ၁၀ ခွက်သောက်
Sunday, 10 October 2010 at 14:09:00 BST
ပိုက်ဆံ ၁၀ နဲ့ မုန့် ၁၀ ခု ၀ယ်စား
Sunday, 10 October 2010 at 14:10:00 BST
၁၀ မိုင် လမ်းလျှောက်
၁-က ၁၀ ထိ အနုလုံ ပဋိလုံ ၁၀ ခါ ရေ
Sunday, 10 October 2010 at 14:11:00 BST
ဆံပင်ဖြူ ၁၀ ပင်နှုတ်
Sunday, 10 October 2010 at 14:15:00 BST
သဂျီးစာကို ကောင်မလေး ၁၀ ယောက်နဲ့ ၁၀ ခေါက်ဖတ်မလို့ဟာ ...ဖုန်း၁၀ခါမည်နေလို့ သွးပြီသဂျီးရေ့
Sunday, 10 October 2010 at 14:18:00 BST
မျက်နှာ ၁၀ ခါသစ် ခေါင်း ၁၀ ခါဖြီး။
ဟင် ဘကျောက် ၀င်နှောက်သွားတယ် ကွန်မန့် ၁၀ ခုပြည့်အောင် ဆက်တိုက်ရေးနေတာကို
Sunday, 10 October 2010 at 14:19:00 BST
၁၀ ပြားစေ့ ၁၀ စေ့ကို အိတ်ထဲ ဆောင်ပြီး အောင်ပြီဟု ပြော။ အထက်ပါ ယတြာ၁၀ခု ၁၀ မိနစ်အတွင်း ပြီးအောင် ပြုပါက ၁၀ နှစ်အတွင်း မိန်းမ ၁၀ ယောက် ရလတ္တံ့။ :P
Sunday, 10 October 2010 at 14:22:00 BST
Sunday, 10 October 2010 at 14:49:00 BST
ဟာ. ည ၁၀ နာရီအတိမှာ ဖတ်လိုက်မိတယ် ဝမ်းသာစရာဘဲ ဘာမှ မလုပ်ရသေးတာ ....... တော်ပါသေရဲ့
Sunday, 10 October 2010 at 15:01:00 BST
မိုးလင်းကတည်းက ၁၀ ၁၀ ၁၀ တွေ SMS တွေလာလွန်းလို့ စိတ်တွေတောင် ညစ်နေရတယ်
ဘယ်ရမလဲ ဆယ်ယောက်ပြည့်အောင် ပြန်ပို့လိုက်တာပေါ့
Sunday, 10 October 2010 at 15:08:00 BST
Sunday, 10 October 2010 at 15:26:00 BST
မျက်နှာစာအုပ်တွေ ဘလော့တွေမှာ တွေ့လို့ သိပေမယ့် ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး...
မွှေးမွှေး ၁၀ခါပေးစရာလည်း အနားမှာဘူမှရှိဘူး;(
စိတ်တိုတိုနဲ့ ရေ ၁၀ခါသောက်ပြီး ဒီကွန်မန့်ကို ရေးလိုက်ပါတယ်... ဟီး ;P
Sunday, 10 October 2010 at 15:34:00 BST
၁၀ ခေါက်တိတိဖတ်သွားပါတယ် အတိုမှောင် :)
Sunday, 10 October 2010 at 15:36:00 BST
၂၀၁၂ ထိ နှစ်တိုင်း ၁ရက်တော့ ရှိမှာပဲ ၁၁.၁၁.၁၁ နဲ့ ၁၂.၁၂.၁၂ ။
အဲ့ကျကော ဘာလုပ်ကြအုန်းမလဲမသိ ....
Sunday, 10 October 2010 at 16:30:00 BST
အဲဒါကို ကြိုသိလို့ အမှတ်တရ အဖြစ် တင်မဲ့ ပို့စ်တွေကို မနေ့က ကတည်းက တင်ပလိုက်တာ။
၁၀ . ၁၀ . ၁၀ မှာ ကိုဇော် အမှတ်တရ ဘာမှ မတင်ပါ ဆိုသလို ဖြစ်အောင်ပေါ့။
Sunday, 10 October 2010 at 17:03:00 BST
မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို/နအဖ တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး အမုန်းအဃာတတွေကြီးနေတာ မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ မြန်မာအချင်းချင်း အတင်း . . အဖျင်းတွေပြောမှ နိုင်ငံရေးလို့ သဘောထားနေတာလဲ မှားယွင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ အဖြူ နဲ့ ကုလားတွေကို ဝေဖန်ရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ပြီး. . ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်ရင် မသိဟန်ဆောင်နေတာကလဲ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထား မဟုတ်ပါဘူး။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်း နေရာတကာ ဥပက္ခာပြုပြီး ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတာ မှားယွင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သူမှာရှိတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဟာ အသုံးမကျပါဘူး။ ကရင်၊ ဗမာ ၊ ရှမ်း ၊ ပအို့ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေမကြည့်ပဲ မြန်မာအချင်းချင်းဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်နဲ့ … အဲဒီအလုပ်သမားတွေကို ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ.. ဘယ်လို ငွေကြးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားအဖြေရှာပေးကြပါဦး။ သံရုံးနဲ့ .. နအဖ ထိပ်ပိုင်းကို ပြောကြားနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိသူများကလည်း .. အစိုးရအချင်းချင်း ၀င်ရောက်ပြောကြားအောင် နားချပေးကြပါ။ မိမိက ဘာမှ မစွမ်းဘူးဆိုလဲ လက်ပိုက်ကြည့်မနေပဲ . . . အနည်းဆုံးတော့ နှုတ်နဲ့ ဆောင်မပေးကြပါ။ ရေနစ်တဲ့သူတွေကတော့ မြက်တစ်ပင်တောင် အားကိုး လိုကြပါတယ်။
Sunday, 10 October 2010 at 17:32:00 BST
ဗျို့သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း (ဆယ်ခါတိတိခေါ်သည်)
စာလုံးပေါင်း ဆယ်ခါစစ်သည်။ (ကော်ပီလုံးဝမကူး၊မူပိုင်ရေး) ဆယ်မိုး ဆယ်နွေ ဆယ်ခါကြုံတာ 10 ခါပြန် မပြည့်သေးခင် ဘ၀သံသရာ ဆယ်ခါမက လည်ခဲ့ဘူးသည်။ ယနေ့ ရောက်လာ 10 သုံးလုံးဟာ ဆယ်ခါ မမြင်လိုက်ရဘူး။ (သတိတောင်မထားမိ) ။ ဆယ်ခါပြန်လွမ်းလိုက်ချင် 10 10 10 ရယ်။ ဒါပေမယ့် အဆဲမပါ သခင်ဇော်မျိုးစာ ဆယ်ခါပြန် ဖတ်လိုက်သေးတယ်။
သဂျီးမင်း ဆယ်ခါပြန် လေးစားပါတယ်။
Sunday, 10 October 2010 at 18:54:00 BST
သူဂျီးမင်း စိတ်မ၀င်စားရင်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကတော့ လန့်စရား)
ဘာမှလုပ်စရာမရှိလို့ ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ်သာ ၁၀ချက်ထုမိတယ်...
ဒါနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ၁၀လုံးသောက်ပြီး အိပ်မလား စိတ်ကူးနေတာ။
မအိပ်ခင် ရေ၁၀ခါပြည့်အောင် ချိုးမလို့ဘဲ.. ရေနွေးက ကုန်သွားတော့ တစ်ခါတောင် မချိုးလိုက်ရဘူး.. ဒီမှာ ချမ်းနေပြီမို့...
ဒီနေ့တော့ မှန်မှတ်ရရဖြစ်အောင် အိမ်ကို တံမြက်စည်း ၁၀ခါလှဲလိုက်တယ်.. သန့်ရှင်းသွားတာဘဲး)
Sunday, 10 October 2010 at 19:13:00 BST
၁၀ရက်၁၀လ၁၀ခု အမှတ်တရ ပိုစ့်တင်မလို့ ရေးနေတာ မမှီလိုက်ဘူး နောက်ကျသွားတယ်
ဒီတော့ ကိုကိုမောင်ရဲ့ ပိုစ့်ကိုဘဲ ၁၀ခါ ဖတ်သွားရင်အမှတ်တရဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..
Sunday, 10 October 2010 at 20:26:00 BST
Sunday, 10 October 2010 at 20:27:00 BST
ဟီ ဟီ ဟီ ဟီ ဟီ ဟိ ဟိ ဟီ ဟီး ဟီးးးးးးးးးးးးးးးး
Sunday, 10 October 2010 at 21:19:00 BST
အမယ် အမယ် သကြီး စီလည်း မျိုးချစ်ကြီး ရောက်နေတယ်..ဟဲ..ဟဲ
၁ဝခါ ၁ဝခါ ဖတ်သွားတယ်
Monday, 11 October 2010 at 03:45:00 BST
Monday, 11 October 2010 at 05:31:00 BST
Monday, 11 October 2010 at 10:12:00 BST
မနေ့က သတိတောင် မထားဖြစ်လိုက်ပါလား..
တနေကုန် လျှောက်သွားနေတာနဲ့.. :D
Monday, 11 October 2010 at 10:15:00 BST
သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ မေတ္တာသုတ်၁၀ခေါက်ရွတ်ပြီး၊ သူများတွေကျတော့ ဗလွတ်ရွှတ်တွတ်နောက်သွားတယ်နော်။
Monday, 11 October 2010 at 10:52:00 BST
Monday, 11 October 2010 at 11:28:00 BST
တော်သေးတယ် ၁၁ ရက်နေ့မှ ဖတ်ဖြစ်လို့
၁၁ မီး ငြိမ်းမယ့်သဘောပေါ့။
Monday, 11 October 2010 at 12:10:00 BST
၁၀ရက်နေ့က ဘလော့မ၀င်ဖြစ်ဘူးး)))
မြစ်ကျိုးအင်းပြောသလိုပဲ ၁၁မီးငြိမ်းအောင် ဒီနေ့မှရောက်ဖြစ်တယ်။
Monday, 11 October 2010 at 15:41:00 BST
မေတ္တသုတ် ၁၀ ခေါက်ပဲ ရွတ်တာလား။
ကျန်တဲ့ ၁၀-သုတ်ပါ ၁၀ ခေါက်စီ ရွတ်ရောပေါ့။
မီသေးတယ် ဒီနေ့ ၁၁ ရက်ဆိုတော့ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ကို ၁၁ ခေါက်ရွတ်။
အားမရသေးရင် ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ကိုပါ ၁၁ ခေါက်ရွတ်လေ။ မကောင်းဘူးလားးး :D
Monday, 11 October 2010 at 17:16:00 BST
၁၀၊၁၀၊၁၀ မှာ ဘလော့ဂ်မဝင်ဖြစ်တော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းလွတ်သွားတယ် အစ်ကိုရေ ၁၁၊၁၁၊၁၁ ရက်နေ့ကို ဆက်စောင့်လိုက်တော့မယ်....
Tuesday, 12 October 2010 at 00:36:00 BST
jual tas promosi bergaransi di sekitar Pulang Pisau hubungi kami no. 0813 8631 3043